Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): 2009
Kachin Manau festival at fraser hill malaysia
at 12/28/2009 07:56:00 PM
at 12/28/2009 06:48:00 PM
Part of the mythology of the Kachins, an animistic tribe in northern Burma, was that they had once receivedabook from God, which included stories of creation, death, resurrection, and evenaflood.
Tradition said that after receiving the parchment book, the men making the long journey back to Kachin land became hungry and ate the book. The Kachins also believed that some dayaforeigner would come and give them back the lost book.
Htoialai ka (myit yu ga)
at 12/22/2009 12:59:00 PM
Tsawra ai myu sha ni e....
Anhte Tanghpare mare de "hka madim" hpe galaw hpang sana da. anhte ni gara hku di nna gara de htawt ra na kun? galoi wa shachyut kau na kun n chye sai.
Myu tsaw myit rawng ai ni e.. amyu sha hpe hkye mayu ai ni e... hpa baw galaw nga ma ai rai?... Wunpawng Amyu Sha niaKa Nu Ka Wa ni e.... nchye ai majaw kun? chye ning len dai hku yu shalai sa na kun?
at 12/15/2009 07:28:00 PM
HUGAWNG A MAKAM MASHAM MUNG LAWU NA HTE GANOI
at 12/15/2009 02:02:00 PM
Karai Hpe Tam Mu Na Yak A Ni?
Nbung hkat ai shinggyim masha niamu mada, chye na hkam la, hkawn hkrang ai kraw dung makam shai hkat ai zawn; kam sham ai hte Karai hpe chye na hkawn hkrang la ai lam mung nbung nga ai.
Chyum Jawng lung ai shaloi, Systematic Theology ngu ai sharin la ra ga ai. Dai gaw Karai Kasang ngu ai hpe mungkan ting chye na hkawn hkrang da ai (world view) hku nna mu la chye la na lam rai nga ai. Dai Karaialam hpe chyum laika kaw ka da sai hte bai shacyaw nhtawm sharin la ra nga ai. Kalang lang gaw chyum laika hta rawng ai yawng hpe hkan sa na n gun dat ai nga yang Karai Kasang hte tsan gang wa lu ai. Bai chyum laika hpe nau nsawn ai sha sak hkrung lam hta Karai hpe htai la yang mung mai tsan gang mat nga ai. Chyum laika hta chyu npawt tawn yang mung, anhte sinpraw ga na ni gaw Karai Kasang hpe chye na yak na lam ni nga nga ai. Karai ngu ai wa hte seng ai amu magam lam, myit mang lam, tinangasak hkrung lam hte matut la lu hkra gaw chyum laika kaw npawt nna she bai hkan nang ra rai nga ai.
Ngai naw kaji yang, nta masha ni hte jinghku ni yawng gaw Nat jaw ai hpe jahkring hkring galaw ma ai. Karawng Karai ngu aialam hpe Nat jaw ai ten hta n kajai ma ai. Raitim, sak hkrung lam hta yak hkak wa yang, dawdan nchye mat yang, myit htum myit chyum hkrum yang kadeemung nlu karum la na zawn re ai ginjang nga yang, E.g: kasha shingtai hka hkrat si yang, n tara ai hku je yang hkrum yang, 'Karawng Karaiemahtai jaw myi law ' nga shaga ai hpe na ga ai. Kalang lang dai Karawng Karai gaw Mu nat hku sa nna je yang ya ai mung mu ga ai. Dai gaw lamu de nga ai nga tsun jahta dan dan rai ma ai. Raitim, dai Karai hpe kaning di matut la ai baw re hpe gaw hkrak nchye na ai. Nkau mi tsun ai, nang n masu, nmawp sha rai yang gaw, nang shaga yang shi madat ya ai nga ma ai. Shau kang wa mawk hkyu pyi gaw naw shiatara hpe shi hkan ai majaw Uru hka pyi shiaga madat ai lam Hpakant ga na ni mau mwi hku naw hkai hkai rai ma ai. Nat jaw ai gaw Karai hte matut ai nrai nga ai. Tinangasak hkrung lam hta dingbai dingna shabyin nga ai minla ni, sa wa shadam ni hpe toi shawawn kau nna, ngwi pyaw ai sak hkrung lam hpe madu lu na yaw shada nga ai. Lam maga mi gaw, tinangakaji kawa ni hte matut mahkai nna hkungga jaw ai lam mung rai nga ai. Dai zawn jaw ai Nat ni gaw langai hte langai, htinggaw hte htunggaw nbung ai.
Nkau niaNat gaw lamu de matut ai Mu Nat, Gumrawng Gumtsa Nat, nkau miaNat gaw si mat sai Kaji Kawa ni, (tsu nat) nkau miaNat gaw hkala nba hkrum nna si mat wa sai (sa wa nat hte ndang nat) ni rai nga ai. Da majaw Nat jaw ai ten hta mung Nat atsam madang ni nbung ai hpe kam ga ai. Mu Nat jaw ai ni hkinrawng sharawt nna madang tsaw ai Nat hku jaw jau ga ai. Dusat mung Nga, Dumsu j(hkai neng) u hpraw jaw ra ai. Jinghku jing yu law jang jaw jau ai Nat mung law wa ai. Grau ai hpe jaw jau ai nga yang, dinghku lum nna jinghku law ai ni gaw madang nem ai Nat kaw na tsaw ai Nat hpe jaw jau ma ai.
Gara Nat mi jaw yang jaw, Nat jaw shagu dusat yam nga gaw madung rai nga ai. Dai hte maren, ngai asak shi jan ten hta Hkristan hpung de woi gale ma ai. Dai shaloi, Nat jaw jau ai arung arai ni yawng hpe wan hta nat kau nna nta kata kaw akyu hpyi ai lam bai galaw sai. Nat jaw ai arung arai nlawm jang Nat ni gaw nsa lu sai ngu ngai kam ai. Nat jaw ai tenelang lang re ai arung arai nga jang machyi wa ai nga ma ai. Lama ma byin jang akyu hpyi, machyi jang, yak hkak jang, lama ma galaw na rai jang akyu hpyi ai lam bai galaw sai. Karai Kasang hpe matut jaw jau ai ngu ngai kam ai. Raitim, dai Karai gaw dusat njaw ra ai majaw Nat hta grau kaja ai, loi ai, dai hta n ga, Shi bau maka nna lam madun ai mung nga ma ai. Machyi ai shaloi akyu hpyi yang machyi shamai ya ai hku kam ai. Ja htu yang ja lu, hpun sau krau yang hpun sau lu, gumhpraw tam yang gumhpraw shaman ya re ai wa re majaw, akyu hpyi ai ngu ai mung, Karai Kasang shaman ya na hpe madung tawn nna hpyi hpyi rai ga ai. Ndai daw de gaw Karai Kasang hpe chyeju shakawn ai ngu ai ga bai lang lang rai ga ai. Raitim, shi kaw hpyi ai sha re.+++MORE+++
HUGAWNG A manang na blog kaw na re.
Jinghpaw Wunpawng Ga Malai Ni
at 12/08/2009 06:55:00 PM
KTC SHIGA LAIKA KAW NA RE
Ga malai ngu ai gaw, moi moi na kaji
kawoi niamatsun maroi ga, sadi jaw
ai, shadum sharin ga ni re. Hkansa galaw
ra ai, koi yen ra ai, myit sawn sumru
hpa hpaji ga ni rai nga ai.
Ga malaiaatsam: Ga malai gaw
mashaamyit masin hpe hkra shangun
lu; matsing mat wa shangun lu ai; ga
shaga yi-ngam grai sa shangun ai; tangdu
shangun lu ai; ga kadun hte tsun shaga
lu ai; ga lachyum hpyan shaleng ya lu ai.
Ga malai nkau mi hpe, moi na mung
bawng rap daw ni hta, dawdan tara hku
lang chye ma ai.
Ga hte malai tsun numhtet da
ai hpe, ga malai nga ma ai. Amyu langai
miasali wunli langai mi mung re. N
jahtuk ai hku lang ai ga malai ni nga ai
zawn, jahtuk nna tsun ai ga malai ga
shagawp ni nga nga mali ai.
Amyu lakung shagu a, manu
dan ai ga malai ni hpe mung, lata tang
dan mat wa na re.
• Myit yang mang ai, Galaw
yang dang ai.
Mang aialachyum—mau ai,
nhkawn hkrang ai. Magam bungli langai
mi hta, manghkang hkrum wa ai shaloi,
myit sha myit nga yang, mahtai kaja hpe
n hkawn hkrang lu ai. Raitim
manghkang hpe matu tam nna, myit n
htum ai sha tatut shakut shaja galaw
yang, kade kaba ai bungli mang hkang
raitim, hpang jahtumeawngdang lu nga
ai hpe n-gun jaw ai ga re. (Ga malai ga
shagawp hpan re).
• Lagawnelu ai gaw yup; Yup
e lu ai gaw ngak; Ngakelu
ai gaw hkaw; Hkawelu ai
gaw htung; Htungelu ai
gaw du u.
Masha gaw lagawn jang yup ja
ai. Nau yup ai masha gaw, sha ayup
mayu nga ai ana (ngak) byin wa chye ai.
Ngak byin sai masha gaw, lahkawng
masum ya shat n sha hkra yup nga lu ai
ana (hkaw) de gale wa lu ai. Hkaw byin
nna, yup hkrai bai yup jang, hkum bum
ai ana (htung) de bai gale wa lu ai.
Htung ngu ai byin sai hpang gaw, du u
hkyen da ya ra sai nga, ma ni hpe n mai
lagawn ai lam shadum ai ga re.
• Marai masum myit hkrum
yang, Panglai nawng pyi
htawk dang ai.
Panglai nawngalachyum—
panglai zawn dam ai nawng kaba.
Marai masum myit hkrum yang, panglai
zawn re nawng kaba hpe pyi, htawk
dang kau lu ai. Myit hkrum ai gaw, awng
dang ninghpang re ngu ai hpe shadum
ai ga re.
• Dayauk da chyik, Lanyau
myaw chik. (Lhaovo)
Lanyau gaw kachyi chyi rai nna,
shiamyi man hpe myit shangut la chye
ai zawn, lajen ren shawa lata brawng
jawm galaw yang, kaning re bungli kaba
raitim ngut mat wa lu ai hpe n-gun jaw
ai ga re.(Ga malai ga shagawp hpan re).
• Matsan nngai ngu hkum
hkrap, Lu nngai ngu hkum
Matsan dik nngai ngu hkrap
nga yang, hpa byin wa na n re. Ba hkam
let bungli galaw shakut yang sha lu su
nga mai wa lu ai. Lu su nngai ngu
arawng mala, raidum nna bungli n
shakut ai nga nga yang mung bai matsan
mat wa lu ai hpe shadum sadi jaw ai ga
re. .(Ga malai ga shagawp hpan re).
• Hpunau myit hkrum hpyen
n shang, Wuloi wula myit
hkrum sharaw n dang.
Kahpu kanau (sh) buga masha
ni myit hkrum mangrum, kahkyin
gumdin nga yang, kaning re hpyen
mung, kata de n shang shalau lu ai. Dai
zawn wuloi wula ni myit hkrum nga
yang, matse ai sharaw mung n shang
kawa lu ai. Myit hkrum ai hte hpyen
hpe makawp maga lu nga ai lam
shadum ai ga re.
• Masha garum ai hpe
matsing da u, Tinang garum
ai hpe malap da u. (Lisu)
Masha wa garum ai hpe
matsing da nna, chyeju dum chye ra ai.
Tinang garum ai hpe bai tsum
shadawng, arawng mala re ai lam gaw,
tinangasari hpe jahpoi lam sha rai nga
ai hpe sadi jaw ai ga re.
• Hka garai n kaba yang,
mahkrai htan ra ai. (zai
Hka garai n kaba yang, htan ra
ai mahkrai hpe aloi sha galaw kau lu ai.
Aten shalai nhtawm hka kaba yang
mahkrai htan ai rai yang jamjau kaba
hkrum chyen nga ai. Aten naw nga yang
galaw shangut ra ai bungli hpe, ngut kre
hkra galaw ra ai hpe sadi jaw ai ga re.
• Hpyen waakumhpa gaw
hkrit hpa re. ( Rawang)
Hpyen wa nga ai hte maren, shi
kaw na lu la ai kumhpa mung, myit kaja
hte jaw ai n re majaw, sadi maja ra ai
hpe sadi jaw ai ga re.
• Aga lai yang hka tai, Ajum
lai yang sha n mai.
N tsun ang ai ga ni hpe tsun
yang hka (shawa) hkrum chye nga ai.
Dai hte maren jum lai ai simai mung
sha n mai nga ai.Ga tsun shaga ai hta n
lai hkra, sadi let tsun chye ra ai hpe sadi
jaw ai ga re. (Ga malai ga shagawp hpan
Tang madun ai,
Sinlum Bum Dau Hkawng
KTC, Nawng Nang
JINGHPAW WUNPAWNG SHILAI KA
သတင်းမှားများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း (fine-leaves blog kaw na re)
at 12/02/2009 05:30:00 PM
Hugawng pa hku byinlai wa yu sai Mungkan majan wwII Sumlahkrung
နော်တို့ ငယ်ငယ်တုံးကစလို့ အခုအချိန်အထိ သတင်းမှားများ သတင်းထိန်ချန်ခြင်းများနှင့် နေထိုင်ကြီးပြင်း လာခဲ့ ကြ ရသည်။ အခုကာလ ကတော့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ဒီမိုကရေစီ စကားလုံးက ထိပ်ဆုံးမှာ နေရာ ယူထားသည်။ ဒီမိုကရေစီခေတ်ကို သွားကြမည်။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီနှင့် ပတ်သက် စပ်လျှဉ်းသော အပြော အဆို အရေးအသား ကြေညာချက်များ လုပ်ဆောင်ချက်များ ဆတက်ထမ်းပိုး တိုးတက်များပြား လာနေသည် ကိုလည်း တွေ့နိုင်သည်။ ဒါကတော့ ကောင်းသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုကောင်းသည့် အချက်များ ထဲတွင် သတင်းမှားများ ထိန်ချန်မှုများ ပါနေသည်။
နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေကို မပြောမီ ငယ်ငယ်တုံးက နေ့တဓူဝ ကြားသိနေခဲ့ရပုံများကို ပြောလိုသည်။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်ကျော်က ရပ်ကွပ်ထဲတွင် လူကြီးတယောက်က ကျနော်တို့ကလေးများကို ပြောဖူးတာတခု အမှတ်ရသည်။ ဇာတ်လမ်းက ဒီလို။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ထိုင်းအမျိုးသမီး တဦးနှင့် အိမ်ထောင်ကျနေသော မြန်မာ အမျိုးသား တယောက်သည် တက္ကဆီမောင်း၍ အသက်မွေးသည်။ သူ၏တက္ကဆီကား ရှေ့မှန်တွင် မြန်မာ ဘာသာစကားဖြင့် အောင်ဇေယျဟု သင်္ဘော ဆေးဖြင့် ရေးထားသည်ဟု ဆိုသည်။ ဤသို့ ရေးထားခြင်း၏ အကြောင်းကတော့ မော်တော်ပီကယ်များ ပိုက်ဆံတောင်း ခြင်းမှ လွတ်ကင်းရန်ဟု ဆိုပြန်သည်။
ထိုသူ၏ တက္ကဆီကို ပိုက်ဆံတောင်းရန် တားသော မော်တော်ပီကယ် (ယာဉ်ထိန်းရဲ)သည် မှန်ပေါ်တွင် ရေးထား သော "အောင်ဇေယျ" ဆိုသော မြန်မာစာလုံးကို တွေ့တွေ့ခြင်း အတော်လေးဖြုံသွား သည်ဟုဆိုပြန်သည်။ ထို့အတွက် ပိုက်ဆံ မတောင်းတော့ဘဲ လွှတ်လိုက်ရသည်လို့ ပြောသည်။ ဘာဖြစ်လို့တုံး ဆိုတော့ အလောင်း ဘုရားဟု မြန်မာသမိုင်းတွင် ထင်ရှားသော ရှင်ဘုရင် ဦးအောင်ဇေယျကို ထိုင်းပုလိပ်များ သိပ်ကြောက်သော ကြောင့်ဟု ဆိုသည်။ ဦးအောင်ဇေယျကို ကြောက်ရသော အကြောင်းက အယုဒ္ဓယမြို့တော်ကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီး အောင်နိုင် သောကြောင့်ဟု ရှင်းပြသည်။ ကျနော်တို့ ကလေးများကတော့ ဇာတိမာန်များကြောင့် ဝမ်းသာ လိုက်သည့် ဖြစ်ခြင်း။ ယိုးဒယားတွေ ထိုင်းလူမျိုးတွေက မြန်မာလူမျိုးတွေကို အခုအထိ ကြောက်ကြရတယ်ပေါ့။ ဖြစ်နိုင်တယ် မဖြစ်နိုင်ဖူး ဆိုတာကိုတော့ ငယ်စဉ်အချိန်က ခွဲခြမ်း စိပ်ဖြာခြင်း မပြုနိုင်ခဲ့ပါ။ ထိုင်းပုလိပ်တွေဟာ မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးထားသော ကားမှန်ပေါ်က အောင်ဇေယျဆိုသည့် စကားလုံးကို ဖတ်တတ်သလား မဖတ်တတ်ဖူးလား ဆိုတာလည်း ဂရုမစိုက်မိခဲ့။
အခုလက်တွေ့ဘဝ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေလာတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှိပါပြီ။ အကယ်၍ မြန်မာလူမျိုး တက္ကဆီသမား တဦးက ထိုင်းမြေကြီးပေါ်မှာ အဲသလိုလုပ်ရင် ထိုင်းပုလိပ်တွေက အောင်ဇေယျဆိုတဲ့ နာမည်ကို ကြောက်မလား မကြောက်လား ဆိုတာတော့ အခုလက်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နေထိုင်နေသော မြန်မာပြည်သား အားလုံးအသိပင်။ ထိုသတင်းမှားကို ကျနော်တို့ ကလေးများက ဝမ်းသာအားရ ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ယုံလည်း ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ထိုင်းဆိုတာ ငယ်နိုင်ပါဆိုသည့် အတွေးကြောင့် ဆိုရင်လည်း မမှား။ ကျနော်တို့ သမိုင်းစာအုပ်များကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံကို ရှေးတုံးက ဘယ်လိုဘယ်ပုံ အကြိမ်ကြိမ် အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ ကလေးတွေကို ကျောင်းမှာ သင် ထားတာကလည်း တဖက်မှာ ရှိနေတာကိုး။ ဒါကို အမှီပြုပြီး မာန် တက်ခဲ့ကြတယ် ဆိုလည်းမမှားပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့ကလေးဘဝက မြန်မာတွေဆိုရင် ထိုင်းတွေက ထိုင်းမြေကြီးပေါ် မှာတောင် ကြောက်ကြ ရတယ် ဆိုတာကို ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် မစဉ်းစားဖူးခဲ့။ မာန်တွေ တက်ချက်ကတော့ အဲသလို။ သတင်းမှားတွေကို ရိုက်သွင်းခံခဲ့ရတဲ့ အကျိုးဆက်လို့ ဆိုနိုင်သည်။ ယိုးဒယားကို ဘယ်အချိန် တက်သိမ်းသိမ်း ရသည် ဟူသော အစွဲက မြန်မာဗိုလ်ချုပ်တွေကို အသာထား မြန်မာအရပ်သူ အရပ်သားများ အကြားတွင်တောင် ရှိခဲ့သည်။
နောက်ဇာတ်လမ်း တခုကတော့ မြန်မာဘုရင်တွေ အာသံတို့ မဏိပူရတို့ကို မကြာခဏ စစ်နိုင်လေ့ရှိခဲ့သည့် သမိုင်းကြောင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာဘုရင်တွေ စစ်နိုင်တော့ သူတို့အလိုကျ ဘုန်းဘယ်လောက်ကြီးကြောင်း တင်ပြဖို့ နန်းတော်တွင်းက ပညာရှိ စာရေးဆရာများက အာသံနိုင်မော်ကွန်း မဏိပူနိုင် မော်ကွန်းတွေ ရေးသားပြီး ဘုရင်တွေကို ဆက်သရသည်။ ထိုစဉ်က ဘုရင်ပိုင် သတင်းစာတွေ ဂျာနယ်တွေ မရှိသေးတာ တော်တော့သည်။ သို့မဟုတ်ပါက ဘယ်လောက်များ ဖောင်းဖောင်းမည်အောင် ရေးကြဦးမလဲ မသိ။
၁၉၉၆ ခုနှစ် ဆောင်းတွင်းကာလတခုမှာ ကျနော် မဏိပူရပြည်နယ် အင်ဖားမြို့တွင် ခေတ္တနေထိုင်ခဲ့ဖူးသည်။ ရံဖန်ရံခါ အင်ဖားတက္ကသလိုလ် မော်ကွန်းထိန်း ပါမောက္ခနှင့် စကားလက်ဆုံ ပြောဖြစ်သည်။ တကြိမ်တွင် ကျနော်က သူ့ကို မေးသည်။ အခုလက်ရှိ မဏိပူရပြည်နယ်တွင် ကသည်းလူမျိုး (မဏိပူရီ) လူဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲဟု ဖြစ်သည်။ ပါမောက္ခကြီးက လက်ရှိတွင် နှစ်သန်းစွန်းစွန်းခန့် ရှိသည်ဟု တွက်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာဘုရင်များ လက်စွမ်းပြ ခဲ့သော လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း နှစ်ရာသုံးရာလောက်တုံးက မဏိပူရ မြို့ပြနိုင်ငံငယ်လေးမှာ အလွန်ဆုံးရှိလှ လူဦးရေ တသိန်းနှစ်သိန်းခန့်လောက်သာ ရှိနိုင်သည်ဟုသာ အကြမ်းဖျဉ်းသဘော စဉ်းစားမိသည်။ ထိုလူဦးရေ တသိန်းနှစ်သိန်းတွင် အမျိုးသမီး၊ ကလေးနှင့် သက်ကြီး ရွယ်အိုများကို ဖယ်လိုက်ပါက စစ်တိုက်နိုင်သော စစ်သားလုပ်နိုင်သော လူဦးရေသည် ဘယ်လောက် ရှိမည်နည်း။ ဝိုင်း၍သာ စဉ်းစားကြပါကုံ။ ကိုယ့်ထက် လူဦးရေ အဆမတန် နည်းသောနိုင်ငံငယ်တခုကို စစ်နိုင်တာ တကယ်တန်းမှာ မာန်မတက်ထိုက်ဟု မြင်မိသည်။ သို့သော် ကျနော်တို့ သိခဲ့ ကြားခဲ့ သင်ခဲ့ရသည်မှာ မြန်မာဘုရင်များသည် ဘုန်းလက်ရုံး ကြီးမားသောကြောင့် မင်းပေါင်းစုံက လေးစားခန့်ငြားရသည် ဆိုသည့် သတင်း အင်ဖော်မေးရှင်းသာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် သမိုင်းတွင် မြန်မာဘုရင်များသည် ကိုယ့်ထက်အင်အား ကြီးသော မဂို အင်ပိုင်ယာထဲက မြို့ကြီးကြီး တမြို့ကိုတောင်မှ မသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါ။ အလားတူ တရုတ်နိုင်ငံ၏ မဟာတံတိုင်းကြီး အခြေထိ ရောက်အောင်ပင် စစ်မချီတက်နိုင်ခဲ့ပါ။ တရုတ်ဘုရင် အဆက်ဆက်က မြန်မာ ပြည်ကို သူတို့၏ ဘဏ္ဍာဆက် နယ်မြေတခုအဖြစ်သာ အသိအမှတ်ပြုသည်။
ယိုးဒယားကိုနိုင်သည်။ အာသံ၊ မဏိပူရကိုနိုင်သည်။ ရခိုင်ကိုနိုင်သည်။ မွန်ကိုနိုင်သည်။ ရှမ်းစော်ဘွားတွေကို နိုင်သည်။ လာအို (လင်းဇင်း) ကိုလည်း နိုင်သည်။ ဘာကြောင့် နိုင်သလဲဆိုတော့ တုတ်ခေတ် ဓားခေတ် လှံခေတ်မှာ ကိုယ့်ထက် အင်အားနည်း သောကြောင့် (သို့) အင်အားနည်းနေသော အခါတွင်မှသာ နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ထက် အင်အားကြီး သော စစ်တိုက်တတ်သော မွန်ဂိုတာတာတွေ ဝင်လာတော့ ပုဂံပြည်ကြီး ပျက်ရတာကို သင်ခန်းစာယူဖို့ မေ့နေတတ်သည်။ ထိုသို့သော သတင်း အင်ဖော်မေးရှင်းကြတော့ မှိန်ထား လိုက်သည်။ ရှေုးဘုရင်တွေရဲ့ ဘုန်းလက်ရုံး အိပ်မက်ထဲမှာ နေနေရင်း နောက်ဆုံး အင်္ဂလိပ်ဝင်လာတော့ တပြည်လုံး သူတပါး လက်အောက်မှာ ကိုလိုနီ ဖြစ်ခဲ့ရသည် မဟုတ်လော။ သို့သော် မာန်ကတော့ မလျှော့သေး။
မလျှော့သေးတဲ့ အကြောင်းကို ဖက်ဆစ်ဂျပန် တော်လှန်ရေး သမိုင်းကြောင်းတွင် တွေ့ရပြန်သည်။ ဖက်ဆစ် ဂျပန်များကို စွမ်းစွမ်းတမံ တွန်းလှန်ခဲ့သော သူတို့မှာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဦးဆောင်သော ဗမာ့ကာကွယ်ရေး တပ်မတော်သာ ဖြစ်သည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းက သမိုင်းသတင်းကို အတင်းအဓမ္မ ရေးစေခဲ့သည်။ အခြား အရေးပါသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ အဖွဲ့အစည်း များကို သမိုင်းတင်ခွင့်မပေးဘဲ ထိမ်ချန်ခဲ့သည်။ မြန်မာသမိုင်း ပညာရှင်များမှာ သမိုင်းကိုသမိုင်းလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် တင်ပြရေးသား ထုတ်ဖော်ခွင့် မရခဲ့။ မရခဲ့သည်မှာ လွတ်လပ်ရေး ရကတည်းက အခုအထိပင်။ လက်ဝဲအုပ်စုကလည်း ဖက်ဆစ်ဂျပန် တော်လှန်ရေးတွင် နိုင်ငံ ရေးအရ သူတို့ကသာ ဦးဆောင် ခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။ သို့သော် မြန်မာ ခေါင်းဆောင် အတော်များများသည် မိမိနှင့်မတဲ့သူ အပါအဝင် အခြားပါဝင်ခဲ့သည့် ဇာတ်ကောင်များ၏ ကဏ္ဍကို ချန်လှပ် ထားလေ့ရှိသည်။ သမိုင်းအရ သတင်းမှောင်ခြထားသည့် သဘောမျိုးဟု ဆိုနိုင်သည်။ နောက်တချက်ကလည်း သမိုင်းပညာ ရှင်များ၊ စာရေးဆရာများအနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ရဲဘော်သုံးကျိပ်ကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ဗမာ့ တပ်မတော်ကို တည်ထောင် ခဲ့သောကြောင့် ဗိုလ်နေဝင်းကို ဝေဖန်ချင်တာပင် ဗိုလ်နေဝင်းလည်း ရဲဘော် သုံးကျိပ် ဝင်ဖြစ်နေတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အားနာပြီး ရဲဘော်သုံးကျိပ် အားနည်းခဲ့တာတွေအပေါ် ပြောမထွက်တာတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပုံရသည်။ အမျိုးသား ဇာတိမာန် ထိခိုက်မည်ကိုလည်း စိုးရိမ်ဟန် ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ ဇာတိမာန်ဆိုတာ လူမျိုးတိုင်း၌ရှိသည်။ ရှိလည်းရှိသင့်သည်။ သို့သော် မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေသာ တည်ရှိသင့်သည်။ ဇာတိမာန်ဆိုသည်မှာ အနာစိမ်းကို လက်သည်းနှင့်ဆိတ်သလို ဆိတ်နေဖို့မလိုပါ။
ဂျပန်တွေ မြန်မာပြည်ကို ထိုင်းနိုင်ငံမှတဆင့် ဝင်လာတော့ ဂျပန်တပ်အင်အား သုံးသိန်းကျော်ရှိသည်။ အင်္ဂလိပ်တွေ အိန္ဒိယကို ဆုတ်ပြေးရသည်။ ဂျပန်တို့ရဲ့ စစ်နောက်ကျောပိုင်းကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သော ဗိုလ်မှူးချုပ်ဝင်းဂိတ်၏ ချင်းဒစ် (ခြင်္သေ့) ကွန်မင်ဒို ပြောက်ကျားတပ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍကို မြန်မာ ကျောင်းသား တို့ လေ့လာခွင့် သိခွင့်မရခဲ့။ မဟာမိတ် တပ်ပေါင်းစုက လေကြောင်းချီတပ်များ၊ အမြောက်တပ်များ၊ သံချပ်ကာတပ်များ အလုံးအရင်းဖြင့် ဂျပန်တွေကို တိုက်ခဲ့တာ မြန်မားကျောင်းသားတို့ မသင်ခဲ့ရ မသိခဲ့ရ။ မဟာမိတ် တပ်ပေါင်းစု၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ရသော မြန်မာပြည် စစ်မျက်နှာရှိ ဂျပန်စစ်သား အရေအတွက်သည် တသိန်းရှစ်သောင်းကျော် ရှိသည်ဟု မဟာမိတ် စစ်မှတ်တမ်း များက ဆိုထားသည်။ သို့သော် ထိုအချက်ကို မြန်မာကျောင်းသားတို့ မသင်ခဲ့ရ။ More+++
KRC KAWN CHYE JU DUM POI GALAW
at 11/30/2009 09:24:00 PM
LAI MAI WA SAI 29 NOV 2009 SHANI
Malaysia mungdanejungda ai Jinghpaw wunpawng dat kasa rung kaw nna woi awn let chye ju dum poi galaw lai wa sai lam chye lu ai.
kyu hpyi shaman ai shat lusha daw sha lamang re lam chye lu ai.
lak lai ai lam gaw yaten magam gun nga ai myu sha ning baw ni kaw nna Hpan Karai hpe chye ju shakawn ai lamang hta sha n ga na moi shawng de magam gun ap nawng laiwa sai hpawan myit su ji nban yawng hpe saw shaga nna masat masa galaw chyeju dum,kumhpa shagrau let angwi apyaw rai ngut kre la lu sai lam chye lu ai.Mung ga hte hpawn rai nna myusha ni shada lam shagu hta arau sha myit hkrum let gaw gap sa wa na lam,ning
baw usa ni hku nna mung ya magam gun nga ai ning baw hte hpa awn ni hpe ya na zawn grau grau awng dang hkra woi galaw gaw gap sa wa ai lam hpe mu lu majaw mung chye ju dum ai la
m tsun shana ai lam chye lu ai.
Ngai hugawng hpe saw shaga ai rai tim magam bungli ten nlu ai majaw nlu du lawm kau dat sai.chyeju dum hpawng kaw nlu du lawm tim KRC hte myusha ni yawng hpe galoi mung myit dum nga nngai lam,bai nna Myusha ni hku nna shagrau ai kum hpa lu hkap la sai lam,KRC hte moikawn ya du ap nawng ai hpa awn ni yawng hpe mung gr
ai chye ju dum ai lam,galoi mung myusha niamatu kyu hpyi garum madi shadaw ya nga ai lam
chye ju dum shiga shana dat nngai law.
ap nawng laiwa sai hpa awn ni hpe shagrau ai lekmat
Email kaw na laika(Aga Manmaw Manau shadung bai htu kau ya sai i?)
at 11/20/2009 07:41:00 PM
Nu Wa, Hpu Nau, Kana Kajan Wunpawng Jinghpaw Amyu sha yawng hpang de lawu na laka hpe aja awa myit sa wa lu na matu ka tang dat ga ai.
+++Manmaw Buga Wunpawng Jinghpaw Amyu Sha niaManau Shadung hte Manau Wang hpe Manmaw Hk Y K Ningbaw Hpyendu Kaba nan woi awn nna jahten, htu, a-grawp kau ya ai lam gaw, Manmaw Buga WP Jinghpaw ni hpe sha nrai Mungkan ting sak-hkrung chyam bra nga ai Wunpawng Jinghpaw yawng hpe sawng dik ai hku nna roi ai, ga law saw ai, jahte tam ai nan rai nga sai. Dai hta jan nna Amyu shada daalapran hta roi rip hkat ai lam kaga nnga na sai.Bai dai Manmaw Manau Wang hpe jahtyen a-grawp kau ngut ai hpang, Manmaw, BMO HK Y K ningbaw wa gaw NANHTE JINGHPAW NI MUNGDAN A MATU HPA BAW AKYU RAWNG A TA?. ngu araw jaw ai sha n-ga MANAU HPE NUM HPU PRANG KAW MI RAI RAI, TSING-DU PA KAW RAI RAI GALAW MU ngu nna mung shawaaman kaw nan tsun ai da.
Manau Shadung hte Manau Wang ngu ai gaw, WP Jinghpaw Amyu sha niamatu tsawdik ai htunghking rai sai, dai hta tsaw ai kaga htunghking nnga ai, moi gaw hkristan nbyin shi ai ten, tsawhtum Madai Nat hpe jaw jau nna galaw ai htunghking kaba re, Manau wang kata nse nsa tsep-kawp nmai galaw ai sha n-ga shanaegadai pyi nmai lai ai, dai sha n-ga Manau nau ai shaning dai mareemasha si ai raitim aga de makoi mayang kadai n-galaw ai, ngu mayu ai gaw dai ginra lamu ga hta kadai nhtu kajam sai, manau dum na jaba wawt yu nhtawm jaba pru ai hte dai manau wang hpe kadai sa kajam nmai sai, sa jahten/sa kajam ai wa, ni gaw dai amyu sha niahpyen rai sai, dai sa jahten ai wa hpe sat kau lu ai shani shing nrai dai wa kaw na hpyi-nyem tawngban wa ai lam sha nnga yang nsim nsa gasat gala mat wa na lam sha nga sai, ndai amu gaw W/P Jinghpaw Mungkan ting (India, China, Burma) na WP Jinghpaw Amyu sha hkum ting dek shagu hpe lukdik lukgaebaw bye ya ai hta grau sawng mat sai lam re.
Myen ni dai daram roi wa nga tim, hpa hpe naw la nga ga ai ta?
myen hpe hkrit ai majaw anhte WP Jinghpaw nianga grin galu kaba sa wa ai lam hta akyu rawng wa ngaani?, ndai bungli gaw amyu sha mying gun nna shamu shamawt nga ai uhpung yawng hta lit nga ai re, lit htawt ap taw na lam nnga ai.
Moi Laika Jaw Masat htaekalang Manau Shadung baw katut sai, dai shaloi gaw Jinghpaw mungenre majaw ngu myit la ai majaw ngu saka, ndai gaw Jinghpaw Mungenan rai nga sai, ya mung Ma-Ah ni zawn mau shalai kau sa-yang gaw anhte daram shagri nkung ai amyu sha mungkan hta nau pyi nnga na sai.
hpa majaw anhteahtunghking hpe anhteaginra hta jahten ai rai ta? daini na ten Wunpawng Mungdan kata shara magup she yu jin wa hkra Myen ngu ai pyi n-nga ai ginra hkaneMyen Budda Gawk-ngu ni shadun mat wa ai gaw kadai nmai hkra, nmai hpu shanhte kam ai hku galaw mai wa ai mungdaw/mungdan byin wa nga sai hpe nang hte nseng ai zawn sha naw nga nga na ga ai kun?
Myen nkau gaw anhte hpe labau nchye ai ni zawn mana shatai nhtawm, Bhamo ngu ai gaw moi kaw na Myen Sam niashara re nga tsun na ma ai.
Laika ka sara John Anderson(1867-68) ka tawn ai "A Report on The Expedition to Western Yunan Via Bhamo" ngu ai laika, laika man 216-9 lapran hta sanglang tawn ai gaw Moi na Manmaw Mare ngu ai gaw hka makauede tawn ai rai nna nta 400 loi jan nga ai, galu de deng mi galu nhtawm malawng maga Sam amyu sha ni hte Lawu mung na Myen ni sa bu htawt nga ai re lam, dai Mareadeng3jan grup grup gra gra de gaw jinghpaw(Kahkyen) ni dam lada ai ginra ni hta mare de nhtawm nga shanu wa ai lam asan sha ka tawn ai.
Bai, Frontier Areas Committee of Enquiry 1947 Report Part I laika buk laika man3hta mung Bhamo Districtenga ai amyu sha niaYup-tung jahpan hpe lawu na hte maren ka tawn ai.
(ii) (a) Bhamo District
Area ............................................. 4,148 sq. miles
Total Population............................... 129,000
Part I Population 52,000
Part II Population .............................. 77,000
Population by Races.
Kachin ........................................... 49,794 or 38.6 %
Shan .................................................. 36,765 or 28.5%
Burmese Group ................................... 33,540 or 26.0%
Indian, Chinese and others .................. 8,901 or 6.9 %
moi na Manmaw Mare gaw Sam ni malawng ngu na nga lai wa ai Sam mare re hpe gaw labau hta ka tawn nga ai, raitim dai aten(1947ning) lahta Sam Mungenga ai jinghpaw gaw 71,070 re majaw Sam hte Jinghpaw Amyu sha ni hku nna tinangamungdaw masat daidaw la ai hpang rapra ai hku nga pra sa wa na ngu ai ga shaka nga tawn ai hte maren langaiahtung hking hpe langai hkungga hkat na lam sha nga ai, Myen wa raitim Kachin State ngu nna dai daw tawn sai lamu ga hta shahte kam ai hku sa roi na lam tsep-kawp nnga ai, AnhteaManau shadung hpe htu agrawp kau ya ai zawn shan hteaGawkngu ni hpe dai hte maren anhte galaw yang hpabaw byin wa na ta?
ndai gaw Tinng Ying Hpung, Zawng Hra Hpung Lasang waaHpung KBC, Kahtawlik ...etc. ngu taw ai baw nre, yawngahtunghking re majaw yawng kaw na aja awa ninghkap ra ai bungli re lam hpe Wungpawng Amyu sha kaji kaba yawng hpang de shadum shana dat ai lam rai ga ai.
Maigan du Wunpawng Jinghpaw Amyusha Hpung(OKA)
ps. 3/4 ya laman Myen laika hte ndai lam hte la-kap nhtawm statement langai shapraw lu na matu bawng jahkrup nga ga ai.
Shata mung de hka sa ja lu mai na kun?
Significant' water found on Moon
Kaja wa nan shata mung hta hka lu tam sai lam hpe hpung tang hpa ji ning hkrin ni gara hku?
More +++Matut hti mai ai++++
Mung kan 2012 Kaja wa htum sana kun?
at 11/11/2009 08:08:00 PM
Ndai kaw bai yu
Portable software ni Tsawm ra mi lang manu ai
at 11/11/2009 07:19:00 PM
Lawu na web address kaw click di nna Download galaw nna USB pendrive hkan bang nna ra ai ten loi loi hte lu lang ai hku re.Ngai hu gawng mung dai Software kasha ni hpe law malawng lang ai hku re,Ram daw gaw lang manu ai,
Ndai kaw yaw http://portableapps.com/news
Gara gaw gara kaw lang ai lam hpe ndai kaw sang lang da nga ai
25ning Shapawng yawng Manau poi India Kachin
at 11/09/2009 06:44:00 PM
Nang Kadai re,Kaning re hpe chye mayu yang Test galaw yu ga
at 11/07/2009 11:24:00 PM
Ndai lawu na link hpe click di nna yes or no sha re.
Duwa Howa Ja La Speaks
at 10/29/2009 07:11:00 PM
Ndai mung hti yu ga(http://myanmarslection.ning.com)
at 10/25/2009 07:29:00 PM
ဒါကိုဖတ်ပြီးမှ အလုပ်သွားလျှောက်ပါ (သို့) အင်တာဗျူးဝင်ပါ
Posted by Online ဂရု on October 13, 2009 at 2:43pm in Technology
Send Message ပေါင်းထည့်ရန်(သူငယ်ချင်း) View Discussions
E Mail ပို့တတ်ရမယ်
ပြောပြီးသားစကားကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ကွန်ပျူတာသမားစစ်စစ် ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ Email လေးတော့ပို့တတ်ရမယ်။ ဆိုလိုတာက သင်ဟာဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ဖြစ် မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဘုန်းတော်ကြီးလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုပြီး Email လေးတော့ပို့တတ်ရမယ်။ Email ပို့တယ်ဆိုတာဘာမှ သိပ်ထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှ ကိုယ်ပေးပို့ရမယ့် စာသားကိုရိုက်ထည့်ပြီး ပို့လိုက်တာပဲဖြစ်မယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင်စာပို့တာပဲပေ့ါဗျာ။
တစ်ခုခုကိုရှာချင်ဖွေချင်တယ်ဆိုရင် Directory ဆိုတဲ့လမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုလှမ်ကြည့်သလိုပါပဲ။ Email ပို့သလိုပါပဲ Internet ကို အသုံးပြုတယ်ဆိုတာလည်း ဘာမှခဲရာခဲဆစ် အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဗျ။ကိုယ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို စွယ်စုံကျမ်းထဲလှမ်ကြည့်သလိုပါပဲ။ Internet ကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာ ပညာရေးအတွက်ဖြစ်စေ၊ ကျန်းမာရေးအတွက်ဖြစ်စေ၊ ဗဟုသုတအတွက်ဖြစ်စေ၊ အချစ်ရေးအချစ်ရာကိစ္စဖြစ် စေ၊ မည်သည့်ကိစ္စမည်သည့် အကြောင်း အရာမဆို အိုဗျာပြောရရင် ယနေ့ခေတ်ရဲ့စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နေ့စဉ်တွေ့သမျှအကြောင်းအရာအားလုံှးုညအနမညနအ ထဲမှာရှိတယ်။ ကိုယ်သိချင် တာမှန်သမျှအားလုံးကိုInternet ထဲမှာရှာလို့ရတယ်။ ဒါကြောင့်ကမ္ဘာရဲ့ဘယ်နေရာမှာနေနေ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတနှင့် သတင်းအချက် အလက်တွေ အချိန်နှင့်တပြေးညီသိရှိနိုင်တယ်။ အဲ့ဒီလိုအချက်အလက်တွေကြောင့်လည်းလူတွေဟာကမ္ဘာကြီးကို ရွာကြီးတစ်ရွာအနေနဲ့တင်စားကြတယ်။ ဆိုလိုတာကရွာ တစ်ရွာမှာ ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်လိုက်တာနှင့်တစ်ရွာလုံး ကသိသွားသလို ယနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာလည်း ဖြစ်ဖြစ်သမျှ၊ ပျက်ပျက်သမျှတွေဟာ အင်တာနက်ကြောင့် သတင်း အချက်အလက်များအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုတချို့ကလည်း ကမ္ဘာပြားပြီလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြ ပါတယ်။
သင်ဟာကွန်ပျူတာအခြေခံတက်ထားပြီးရုံပဲရှိသေးတယ်။ ကွန်ပျူတာစက်ပြင်သင်တန်းဖြစ်တဲ့ Hardware သင်တန်းတွေဘာတွေလည်း မတက်ရသေးဘူး ဆိုသော်ငြားလည်း ကွန်ပျူတာနောက်ဘက်ကရှိတဲ့ ကြိုးတွေကိုတော့တပ်တတ်ရပါမယ်။ ဒါကလည်းသိပ်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ တပ်ရမည့်ကြိုးတွေကို ရေတွက်ပြရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် -
(၁) Keyboard ကြိုး
(၂) Mouse ကြိုး
(၃) AC Power ကြိုး
(၄) Monitor Display ကြိုး
(၅) Printer တပ်ထားမယ်ဆို Printer ကြိုး
(၆) Speaker တပ်ထားမယ်ဆို Speaker ကြိုး
(၇) Modem ချိတ်ထားမယ်ဆို တယ်လီဖုန်းကြိုး
(၈) Network ချိတ်ထားမယ်ဆိုရင်Network ကြိုး စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာသိရမှာက Keyboard ရယ် Mouse ရယ် Printer ရယ်ဟာ အောက်ကပုံမှာပြထားသလိုမဟုတ်ဘဲ USB အနေနဲ့လည်း တပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ Keyboard နဲ့ Mouse ဟာ Mini Din Connector အမျိုးအစားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ PS2 လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ keyboard နဲ့ Mouse ခေါင်းဟာပုံစံတူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့မမှား ရအောင် အရောင်နဲ့ခွဲထားတယ်။ Keyboard က ခရမ်းရောင်ဖြစ်ပြီး Mouse က အစိမ်းရောင်ဖြစ် ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုအရောင်နဲ့မှတ်ရမည့် နောက်ထပ်အပေါက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Speaker အပေါက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Computer တွေမှာပုံမှန်အားဖြင့် အသံနှင့်ပတ်သက်လို့ Audio Jack ပေါက် ၃ ပေါက်ပါရှိပါတယ်။ အစိမ်းရယ်၊ အပြာရယ်၊ ပန်းရောင်ရယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ၃ ပေါက်ထဲမှာမှ Speaker ဟာ
Computer ရဲ့နောက်ဖက်ကကြိုးတွေတပ်တဲ့နေရာမှာ အထူးသတိပေးချင်တာကMonitor ကြိုးပဲဖြစ် ပါတယ်။၎င်း Monitor ကြိုးမှာ Pin လေးတွေကကွေးသွားတာတို့၊ ကျိုးသွားတာတို့၊ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ၎င်း Monitor ခေါင်းကိုတပ်တဲ့နေရာမှာ ခေါင်းဟာ Vshape ပုံစံ အစောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပြောင်းပြန် ထိုးရင်မဝင်ပါဘူး။ ဒါကိုကိုယ်ကမသိဘဲနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ မမြင်မစမ်းနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ အတင်းထိုးတပ် လိုက်ပါက Pin ကလေးများကွေးခြင်း၊ ကျိုးခြင်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါကျ Monitor ဟာ အရောင်မမှန် တော့ပါဘူး။ ဒီလိုမဖြစ်အောင်သင်ဂရုစိုက်ရပါလိမ့်မယ်။
နောက်ထပ်အရေးတစ်ကြီး သတိပေးချင်တာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါက Power ကြိုးပါပဲ။ Power ကြိုးကို Power Supply မှာ သေသေချာချာ မိမိရရတပ်ဖို့လိုပါတယ်။ မမိတမိတပ်ထားခြင်း၊ Loose ဖြစ်နေခြင်းဟာရှော့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သေသေချာချာမိမိရရတပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ အကယ်၍သေချာ မတပ်ထားပါက၎င်းနေရာမှ 'ဖျစ်ဖျစ် ဖျစ်ဖျစ်' နဲ့ အသံကြားနေရတတ်ပါတယ်။ ကျန်တာကိုတော့ ပုံ ၁.၂၄ မှာပြထားတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်ပါ။
CV From လေးတော့ရိုက်တတ်ပါစေ
အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ အလုပ်လာလျှောက်တဲ့သူဟာ CV Form လေးတောင် ဖြောင့်အောင်ဖြည့် မလာပါဘူး။ ဒါကိုအလုပ်ရှင်ကအလုပ်မခန့်ဘူးဆိုရင် ဘာမှသိပ်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါတွေဟာ အရေးကြီးတယ်မပေါ့ပါနဲ့။ CV From ကိုကြည့်လိုက်ကတည်းက သေသပ်မှုမရှိ၊ ပြည့်စုံမှုမရှိရင်အဲ့ဒီမှာတည်းက သင်ဟာ အထင်ကြီးချင်စရာ၊ ယုံကြည်ချင်စရာ၊ အားကိုးချင်စရာ၊ အလုပ်ခန့်ချင်စရာကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ CV From ကို ကောင်းစွာရိုက်တတ်ဖို့လိုအပ်သလို ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်တတ်ဖို့လည်း လိုအပ် ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ CV From ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ဖြည့်နေကြတယ်ဆိုပေမယ့် အရင်ကတည်းက စံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ CV From ပုံစံကိုအခုဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၎င်း CV From ရဲ့ထူးခြားချက် ကတော့ CV From တို့မည်သည်ဘောင်မခတ်ရပါဘူး။
နောက်တစ်ချက်က အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Curriculum Vitae ကိုစာလုံးတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံးကြား Space တစ်ချက်စီခြားရပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်း မှတ်ထားရမှာက စာလုံးတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံးကြား Space တစ်ချက်ခြားတဲ့ စာလုံးတိုင်းဟာ စကားလုံးတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး ကြားမှာတော့ Space သုံးချက်ခြားရပါတယ်။ ဒီတော့ကာ Curriculum နဲ့ Vitae ကြားမှာ Space သုံးချက် ခြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Real life in focus ( The star news)
at 10/20/2009 10:51:00 PM
By MICHELLE M.Y. CHAN
THE No Refuge: Burmese Refugees in Malaysia photo exhibition at Kuala Lumpur’s Central Market highlights the plight of the displaced Myanmarese population in Malaysia, many of whom left behindadeplorable existence in Myanmar but found life here onlyamarginal improvement.
Organised by the Annexe Gallery and human rights NGO Suaram, the exhibition features 70 photographs by five award-winning photojournalists.
Making do: A photograph by Simon Wheatley showing Burmese refugees in an apartment in the Pudu neighbourhood.
The images are captured in real-life settings and focus on the woeful persona-non-grata predicament of the displaced Myanmarese in Kuala Lumpur and surrounding areas.
Food shortage worries indigenous Kachins in food-rich valley
at 10/15/2009 07:34:00 PM
Land confiscation by the Burmese military junta has left indigenous Kachins in food-rich Hukawng (also spelled Hugawng) valley in northern Kachin State fighting for survival, said local sources.
Now they cannot receive relatives and guests in their homes because they are unable to serve them proper meals, according to residents of Danai (also spelled Tanai), the main town in the valley.
A Thai-styled factory is under construction beside Ledo Road in Hukawng Valley
Tradition demands that every family receives all guests and relatives and serve decent and proper food because they used to harvest an abundance of rice-paddy and crops in their farms every year, given the rich-soil for cultivation, said natives of the valley.
Now, they have lost all their farms to the junta’s confiscation drive. Over 200,000 acres of land in the valley were seized and handed over to the Rangoon-based Yuzana Company in 2006, said local Kachins.
Since late 2006, the Yuzana Company has been cleaning up the deep forests along Ledo Road on the left and right, for Cassava and Sugarcane cultivation. It has also constructed two large Thai-style factories and worker’s blocks.
Asaresult, most indigenous Kachins, original land owners of the valley have no more land and farms to cultivate traditional rice-paddy, fruits and seasonal crops, said locals. They are now working in the company, they added.
People are now struggling to eke outaliving in Kachin villages between Namti and Danai along the Ledo Road, (also called Stilwell Road)--- Dum Bang, Nawng Mi, Sahtu Zup, Wara Zup, Ting Kawk, Bangkok, Kawng Ra and Danai, according to the villagers.
Quiteafew villages have to cultivate some poppy for survival even as opium demand is high in the local gold mines. A Viss of opium can be sold for over 1 million Kyat (1Viss = 1.6 Kilograms), added locals.
Slg. Tsa Ji, General Secretary of Kachin Development Networking Group (KDNG) who publishedareport called "Valley of Darkness" told KNG today, "The sustainable living and the traditional livelihood of the indigenous Kachins will be eliminated as long as the Yuzana Company is stationed in the valley".
On the flip side, the valley has become one of largest gold mining areas in the country after the Kachin Independence Organization (KIO) signedaceasefire agreement with the junta in February 24, 1994.
Extensive gold mining and expansion of cultivation in the natural forests by the Yuzana Company has been severely damaging the World’s Largest Tiger Sanctuary in the valley recognized by the US-based Wildlife Conservation Society (WCS) in 2004, said local Kachin watch dog groups.
Now, the Myitkyina-based World Food Program (WFP) under the United Nations is distributing much-needed rice to Sadung areas in east Kachin State, where the indigenous Kachins cultivate poppy rather than rice-paddy for survival, said WFP sources.
Most people in Kachin State are farmers. But they cultivate paddy incurring losses because they do not get any support from the military regime and they have to sell paddy to the junta at fixed-reduced prices, said local farmers.
The junta claims that Kachin State is fourth largest rice-bowl in the country.
If you want to read more related stories, please log on to www.kachinnews.com and www.kachinnews.com/kachin.
Malay kaw na Tsinyam ni Romania mungdan de ang
Dai ning gaw Romania mung dan mung refugeee ni hpe shaga ai mungdan kaw lawm wa sai hpe chye lu ai.
Hugawng hte rau nga nta na nta masha nkau mi dai ni UN rung na pru wa nna Romania hte seng ai lam tsun dan nga lu ai.
lak lai ai lam Romania mungdan gaw ndai lang shawng nnan Refugee ni hpe shaga ai re lam chye lu ai.Dai shaga ai ni yawng mung Jinghpaw wunpawng myu sha ni hpe sha re lam chye lu ai.
ROMANIA mungdanalam
This article is about the country. For other uses, see Romania (disambiguation).
Romania (pronounced /roʊˈmeɪniə/ ( listen); archaic: Rumania, Roumania; Romanian: România [romɨˈni.a] ( listen)) isacountry located in Southeastern and Central Europe, North of the Balkan Peninsula, on the Lower Danube, within and outside the Carpathian arch, bordering on the Black Sea. Almost all of the Danube Delta is located within its territory. Romania sharesaborder with Hungary and Serbia to the west, Ukraine and the Republic of Moldova to the northeast, and Bulgaria to the south.
The territory's recorded history includes periods of rule by Dacians, the Roman Empire, the Bulgarian empire, the Kingdom of Hungary, and the Ottoman Empire. Asanation-state, the country was formed by the merging of Moldavia and Wallachia in 1859 and it gained recognition of its independence in 1878. Later, in 1918, they were joined by Transylvania, Bukovina and Bessarabia. At the end of World War II, parts of its territories (roughly the present day Moldova) were occupied by the USSR and Romania becameamember of the Warsaw Pact.
Romania has the 9th largest territory and the 7th largest population (with 21.5 million people) among the European Union member states. Its capital and largest city is Bucharest (Romanian: Bucureşti [bukuˈreʃtʲ] ( listen)), the 6th largest city in the EU with 1.9 million people. In 2007, Sibiu,acity in Transylvania, was chosen asaEuropean Capital of Culture. Romania also joined NATO on March 29, 2004, and is alsoamember of the Latin Union, of the Francophonie of the OSCE and an associate member of the CPLP. Romania isasemi-presidential unitary state.
Malaysia UN shiga ထိုင်းနယ်စပ် ဒုက္ခသည်အထိ ဂယက်ရိုက်
at 10/03/2009 10:15:00 PM
၀ီရ / ၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၉
ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးက မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတို့အား ရှေ့လတွင် ဒုက္ခသည်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် သောင်းချီထုတ်ပေးမည့် သတင်းကြောင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်များက မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ကူးပြောင်းရန် စီစဉ်နေကြကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ စံခရဘူရီခရိုင်၊ ဘန်တောင်ယန်း ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် (၃) နှစ်ကြာ နေထိုင်ခဲ့သော်လည်း ဒုက္ခသည်အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် မရရှိသေးသူ ကိုနိုင်အောင်မွန် ဆိုသူက “အခု မလေးရှားမှာ ယူအန်က ဒီလိုလုပ်လို့ ဒီစခန်းထဲက ကတ်မရှိသေးတဲ့ သူတွေအားလုံးလိုလို မလေးရှားကို ကူးချင်နေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့သူတွေပဲ သွားနိုင်ကြတာပေါ့။ မယားနဲ့ သားသမီးနဲ့ လူတွေကျတော့ သွားဖို့က မလွယ်ဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကတ်မရှိတဲ့သူအားလုံးက သွားချင်နေကြတယ်” ဟု ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောကြားသည်။
"မလေးရှားကို ရောက်နေတဲ့ တရားမဝင် မွန်တိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်း ဒုက္ခသည်အဖြစ် အခုလို အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ နှစ်ဆန်းပိုင်းတုန်းက မွန် (၅,၀၀၀) လောက် စာရင်းသွင်းထားကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် လာမယ့်အောက်တိုဘာ (၁၅) ရက်နေ့ ကျရင် အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရသူ (၃,၀၀၀) လောက်ကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမှာ ဖြစ်တယ်” ဟု ကိုပါအေးနွန်က ပြောသည်။
ဘန်ကောက်မြို့မှ ထိုင်းတောင်ပိုင်း ဟတ်ယိုင်နယ်စပ်ကတဆင့် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့သို့ရောက်ရှိရန် လူတဦးအတွက် တရားမဝင်လမ်းကြောင်းမှ စရိတ်စကအဖြစ် ဘတ်ငွေ (၂) သောင်းခွဲ ကုန်ကျကြောင်း သိရသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ယခုကဲ့သို့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်ဆိုခြင်းကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည်တို့က အခွင့်အရေးကောင်းတရပ်အဖြစ် မြင်ကြသောကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားသူ အများအပြားရှိကြောင်း တက်ခ်ခရိုင်မှ ဒုက္ခသည်လက်မှတ်ရရန် (၂) နှစ်ကျော် စောင့်ဆိုင်းနေသူတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “မဲဆောက်ဘက်က စခန်းတွေက လုပ်ကိုင်တာ ကြာတယ်လေ။ မျှော်လင့်ချက်လည်း နည်းတယ်။ အပြင်ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်လို့မရဘူး။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံရှိမှ နေလို့အဆင်ပြေတယ်။ ဒါကြောင့် မလေးရှားမှာ ခေါ်ပြီဆိုတာနဲ့ သွားချင်ကြတာပေါ့။ ဟိုမှာက အဲဒီကတ်ရရင် အလုပ်လည်း လုပ်လို့ရတယ်။ အကူအညီတွေလည်း ရတယ်။ လုံခြုံရေးအတွက်လည်း မစိုးရိမ်ရဘူးလေ” ဟု ပြောသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနက် ရိုဟင်ဂျာမှာ အများဆုံးဖြစ်ပြီး ချင်း၊ ကချင်၊ ရခိုင်နှင့် မွန်တို့လည်း ဒုက္ခသည်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူ (၆) ထောင်မှ သောင်းဂဏန်းနီးပါး ရှိကြသည်။
Hugawng yu ga ai WP Sumla hkrung/yu ngwi ni
at 9/27/2009 08:21:00 PM
kaw na re
Trand ( dazik ra sha dik ai kun?)
at 9/26/2009 10:55:00 PM
အမေရိကန်ရဲ့ အထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့ အရင်းရှင်စီးပွားရေးသမား နဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင် တို့အကြား တူညီမှုတွေဟာ မရှိသလောက်ပဲ ဖြစ်မှာပါ။
ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်သူဌေးကြီး ၀ါရင်ဘာဖက်(Warren Buffett) နဲ့ တရုတ်သမ္မတ ဟူကျင်းတောင်(Hu Jintao) နှစ်ဦးကြားမှာ တူညီချက်တခုတော့ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အ၀တ်အစားပါပဲ။
အချမ်းသာဆုံးနဲ့ ပါဝါအရှိဆုံး သူတို့နှစ်ဦးဟာ Trands လို့အမည်ရတဲ့ အင်္ကျီဝတ်စုံကို ၀တ်ကြပါတယ်။
လူသိနည်းတဲ့ အဲဒီ Trands ၀တ်စုံကို ဒါရန်ကုမ္ပဏီ(Dayang) က ထုတ်လုပ်ပြီး တရုတ်ပြည်က အသက် ၆၃ နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ လီကွေ့လျှံ(Li Guilian) အမျိုးသမီးက တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ မကြာခင်က Berkshire Hathaway ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် သူဌေး ၀ါရန်ဘာဖက် က ဒါရန်ရဲ့ဝက်ဆိုက်မှာ Trands ၀က်စုံကို ကြော်ငြာပေးလိုက်တာ လီရဲ့ ကုမ္ပဏီစတော့ဟာ ရ၀% အထိ ခုန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလမှာ လီရဲ့ကုမ္ပဏီ သက်တမ်း နှစ်၃၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အတွက် ဘာဖက် ကို ဖိတ်ခေါ်ခွင့်တောင်းခဲ့လို့ အဲဒီကြော်ငြာလေးကို လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ “Trands အင်္ကျီက ၀တ်ရတာ သက်တောင့်သက်သာရှိတယ်၊ ကျနော်ခရီးထွက်ရင် အဲဒီအင်္ကျီကို နေ့တိုင်းဝတ်နေတာ အင်္ကျီလဲ မတွန့်တတ်ဘူး” လို့ သူကပြောပါတယ်။ ဘာဖက် က သူကုမ္ပဏီရဲ့ အရာရှိတွေနဲ့ မိတ်ဆွေ သူဌေးကြီး ဘီဂိတ်စ် (Bill Gates) တို့ကိုလည်း Trands ၀တ်စုံကို ၀တ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါသေးတယ်။
တရုတ်သမ္မတ ဟူကျင်းတောင် လည်းပဲ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ လီရဲ့ဆိုင်ခွဲတခုကို ပီကင်းမြို့မှာတွေ့ပြီး Trands ၀တ်စုံကို စတင်ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်နဲ့မတူပဲ တရုတ်သမ္မတရဲ့ အ၀တ်အစားသတင်းဟာ တရုတ်ပြည်ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ သတင်းမီဒီယာမှာတော့ ဖော်ပြခွင့် မရှိပါဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်တုန်းက ဘာဖက်ဟာ သူရဲ့စက်ရုံဖွင့်ပွဲတခုအတွက် တရုတ်ပြည်ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဒါရန်ရဲ့ နိုင်ငံခြားဈေးကွက်ဒါရိုက်တာ ဒေးဗစ်က ဘာဖက်ကို Trands ၀တ်စုံ ၀တ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ “ကျနော်က ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအကြောင်းပဲသိတယ်၊ အ၀တ်အစား အကြောင်းဘာမှ မသိဘူး စိတ်လည်းမ၀င်စားဘူး၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ကျနော်ကိုယ်လုံးအတိုင်းနဲ့ ချုပ်ပေးလိုက်တဲ့ ၀တ်စုံဟာ ၀တ်လို့သိပ်ကောင်းတယ်၊ ပြန်ပြင်ရတယ်ဆိုတာ လုံးဝ မရှိဘူး” ဟု ဘာဖက်က ပြောပြပါတယ်။
အဲဒီခရီးစဉ်မှာပဲ ဘာဖက် က ဒါရန်ကိုတည်ထောင်သူ လီ နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ လီရဲ့ နောက်ခံအကြောင်းကလည်း ဘာဖက်ကို စိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။ လီဟာ ငယ်စဉ်က လယ်သူမလေးဘ၀ကနေ ယနေ့မှာ ဖက်ရှင်လောကရဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အမျိုးသမီးတဦး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါရန်ကုမ္ပဏီကို ၁၉၇၉ နှစ်မှာ အကြွေး ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ လောက်နဲ့ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့မှာ ၀န်ထမ်းပေါင်း ၁၅၀၀၀ နဲ့ လည်ပတ်နေပြီး နှစ်စဉ် အ၀တ်အထည်ပေါင်း ၅ သန်းခန့် ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။
ဘာဖက်ရဲ့ကြော်ငြာ မထွက်လာခင် အရင်တုန်းက တရုတ်ပြည်မှာ Trands ၀တ်စုံကို လူသိနည်းကြပါသေးတယ်။ သာမန်တရုတ်ပြည်သူအနေနဲ့ Trands ဟာ ဈေးလည်းကြီးနေပါတယ်။
အသက်သာဆုံး Trands ၀တ်စုံတစုံဟာ ဒေါ်လာ ၈၈၀ ဈေးရှိပြီး ဈေးအကြီးဆုံး ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ နီးပါး ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယခုအချိန်မှာ ဘာဖက်ရဲ့ Berkshire ကုမ္ပဏီက ဒါရိုက်တာလေးဦးနဲ့ Microsoft ဘီဂိတ်စ် တို့ပါ Trands ၀တ်စုံကို ၀တ်ဆင်နေကြပါတယ်။ “အခုဆို ကျနော့်ဆီမှာ Trands ၀တ်စုံ ၉ စုံ ရှိတယ်၊ အရင်က အင်္ကျီအားလုံးကို ပစ်လိုက်ပြီ” လို့ ဘာဖက် က ပြောပါတယ်။
(စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက် ထုတ် ဝေါ်စထရစ်ဂျာနယ် မှ ကောက်နုတ်ထားပါတယ်။)Myitkyina blog kaw na re
Gum Hpraw nnan
at 9/25/2009 07:20:00 PM
hugawngajawng ma prat na manang waablog bai hti yu ga
at 9/21/2009 10:12:00 PM
Galai Wa Nga Ai Jinghpaw Wunpawng Hkalup Hpung Woi Masa
Tsaban 21aBuga Hpung Woi Sasana lam hpe myit wa ai shaloi, Ningbaw ningla niasat lawat hte byin nga ai hta hkan nna, law law se galai wa nga ai buga hpung woi masa hpe naw jahta mayu ai.
Jinghpaw Wunpawng hpung shingwang kata Hkalup Hpung, Kathawlik, Shanglawt, Ingalikan (Anglican) kaga Evangelical hte Fundamental ni yawng hta shingdu labau masa loi bung nga ai.
Mungdan kata dinghku majan laja lana garai nbyin yang na mabyin,
Mungdan kata dinghku majan nsin sin ai ten na mabyin,
Simsa lam la ngut ai hpang na htoi pru wa ai ramma nianingmu ni gaw, Wunpawng ginra langai hta sha raitim, myit mang sumru ai lam ni shai la nga sai.
Mungdan Dinghku majan garai nhpang shi yang, Hpung kata hta, Rev. Dr. Lahtaw Gum Se tsun ai "Karai Kasang Jaw Ya ai Hpaji Mu Sani" hte maren, laika hpaji jawng ni law law hpaw nna tinang madu laika sharin, hkai sun hte galaw sha lam hta hkindu matsun prut ai zawn lani hte lani hka jaw nna bran wa ai hkai nmai hpa, Wunpawng sha niagam maka tsawm htap wa ai masa, Hkam kaja lam tsi rung ni, matut mahkai lam ni dai atenesak hkrung wa ai ni mu kau dat na masai.
Mungdan dinghku majan kata du shang wa ai hte rau, jawng ni nnga mat sai, mare kahtawng ni dumbri dumbra rai mat nna, n gaw htawt, dinghku masha shamat, lam mahkrai di, tsi hte jum nlu sha, shangai wa ai ni ngai zawn kaji hkak hkak, hpaji nlu sharin rai sai. Mare kaba hkan nga ai ni, yi sa lekmat lang, porter hkan na nkam nna hprawng, dinghku kata dap lum hkra nlu yup ai shaning law law rai nna ana ahkya amyu myu hte gasat hkat nga ra ai majaw, asak hpe lahpaw hte hkayawp da ai hpa. Dai aten hta, woi awn la na masha, kanu kawa tai ya ai wa nnga ai zawn buga ni shara mi kaw mare de dat, htawt mat wa, bai shara mi kaw de, nat kau ya re ai gaw, ndai laika ka nga ai BUM SIN WA pyi dum nta shamat myen hprawng hprawng nna nta kaw n yup ai nhtoi ni hti pyi ndang sai, ngu yang dai ni na ramma ni gaw yup mang hkai ai she shadu nga na masai.++++More++++
BumsiwaaKarai masa
at 9/18/2009 10:59:00 PM
*BRAIN DAMAGING HABITS *
1. *No Breakfast *
2 *. Overeating=2 0*
3. *Smoking *
4. *High Sugar consumption *
5. *Air Pollution *
The brain is the largest oxygen consumer in our 20 body. Inhaling polluted
air decreases the supply of oxygen to the brain, bringing aboutadecrease
in brain efficiency.
6 *. Sleep Deprivation *
Sleep allows our brain to rest.. Long term deprivation from sleep will
accelerate the death of brain cells..
7. *Head covered while sleeping *
and decrease concentration of oxygen that may lead to brain damaging
8. *Working your brain during illness *
9. *Lacking in stimulating thoughts *
10. *Talking Rarely *
The main causes of liver damage are: **
1. *Sleeping too late and waking up too late are main cause. *
2. *Not urinating in the morning. *
3 *. Too much eating. *
4. *Skipping breakfast. *
5. *Consuming too much medication. *
6. *Consuming too much preservatives, additives, food coloring, and
artificial sweetener. *
7. *Consuming unhealthy cooking oil. *
As much as possible reduce cooking oil use when frying, which includes even
the best cooking oils like olive oil. Do not consume fried foods when you
are tired, except if the body is20very fit.
8. *Consuming raw (overly done) foods also add to the burden of liver. *
get rid of unnecessary chemicals according to 'schedule.'
The top five cancer-causing foods are: **
1.. *Hot Dogs **
Because they are high in nitrates, the Cancer Prevention Coalition advises
that children eat no more than 12 hot dogsamonth. If you can't live
without hot dogs, buy those made without sodium nitrate.
2. *Processed meats and Bacon **
3. *Doughnuts **
Doughnuts are cancer-causing double trouble. First, they are made with white
flour, sugar, and hydrogenated oils, then fried at high temperatures.
Doughnuts, says Adams , may be the worst food you can possibly eat to raise
4. *French fries **
Error! Filename not specified.**
Like doughnuts, French fries are made with hydrogenated oils and then fried
at high temperatures. They also contain cancer- causing acryl amides which
occur during the frying process. They should be called cancer fries, not
French fries, said Adams .
5. *Chips, crackers, and cookies **
All are usually made with white flour and sugar. Even the ones whose labels
claim to be free of trans-fats generally contain small amounts of
PASS THIS TO ALL WHOM YOU LOVE & CARE FOR. ............ .. ...*
*HAVE A PLEASANT DAY !*
Laiwa sai ten na KRC,KDO ning baw Usaashagun laika
at 9/14/2009 11:42:00 PM
Dear Hkau ,
Ngwi pyaw hkam kaja nga na hpe kam ai. An nu wa ni mung KK shaman chyejuamajaw America ga de ngwi pyaw ai hte du saga ai. Anhte Malaysia Airline hte sa wa ai rai nna Tai wan transit re. Taiwan kaw 1Hr daram hkring nna America de kalangta matut sa mat wa ai. USA Los Angelis nbungli pa daru de du ai hpang, Las Vegas - Texas de kalang ta matut hkawm na dai shana yup tung 12 Am daram hta du sai.
Case worker mung manang wa re majaw Lam shagu hta kaja dik ai hku rai taw nga ai. Nta langai shap da ya ai an nu wa ni hpe hkrai jaw da ma ai. Malu masha lam shagu tsang nra hkra lajang da ya ma ai.
Ya gaw document ni naw lajang taw ai majaw bungli rai nlu galaw shi ai. Shata myi hpang de she bungli galaw hpang mai na re. Telephone rai nlu shi ai majaw Ph: rai nlu shaga ai re. Ph: lu ai hpang de shaga wa na.
Roi hte ma hpe ma myitdum nga ai lam shakram ya rit. Bai nna langai garum hpyi mayu ai lam gaw ngai jinghpaw CD ni langai mung nlu la sa ai. Who are the Kachin hpe byin mai yang web kaw naw mara ya rit.
KK bau sin makawp maga ya nga u ga.
at 9/13/2009 09:42:00 PM
China’s Failed Foreign Policy----
မစွမ်းသာသည့် တရုတ်ပြည် ( Irrawaddy)
at 9/13/2009 09:38:00 PM
written by tata, September 11, 2009
တရုတ်က အရှံးအမြတ် တွက်ပြီးသား။ ရေနံ ပိုက်လိုင်းနဲံ့ အနီးဆုံး အ ဟန့်အတားတွေကို အရင် ကိုင်မှာဘဲ။ ပြီးရင် ကချင် ကို ရအောင်ကိုင်မှာ။ စောင့်ကြည့်။
at 9/09/2009 11:18:00 PM
NAM KAWN TSAW NAM KAWN
Lamu mung ai shiga
at 9/07/2009 10:33:00 PM
Shaning shagu lamu mung mung re ten myi malaysia mungdan nga ai Kachin niakata kaw byin byin rai nga malu ai.
Jinghpaw wunpawng myusha ni shada myit hkrum wa sai nga jang tsadan wa gaw galoi mung lam amyu myu hku nna agung alau shang shang rai nga malu ai.Yaten hta sadi ra dik gaw myu sha ni myit hkrum nga ai uhpung ahpawng de,mang hkang amyu myu shabyin nna, sai garan gin hka lam, dai myit hkrum hpung hpe shabyak kau ya mayu ai
tsadan nga ai, ngu hpe mungdan shagu na Myu wunpawng sha ni dum ra nga mali ai.Buga kata de tai hpyen wa gaw myu wunpawng sha ni hpe ja ai ladat hte shamyit kau na matu lajang nga sai ten mung rai nga ai,Tai hpyen wa gaw buga kata sha nrai mai gan mung dan hkan nga ai jinghpaw wunpawng myusha ni hpe shada myit hkrum lam mat mat hkra maw lanyet taw nga ai ten mung re.
An hte ethnic nialapran kata lam de shang nna laiwa sai 3ning kawn jahten na lam hkyen da sai lam mung na chye lu nga sai.Yawng myit hkrum ai myusha u hpawngalapran,myu shada nkam hkat na matu,Jagum hpraw mang hkang,myusha mang hkang,ning baw ni hte Numla kanawn mazum(sex)mang hkang,
sumprat gaba ni hpe hkyen lajang tawn da ya sai lam chye lu ai,Dai mang hkang ni hpe aten jahtuk nna shapraw dat ya ya rai nga ma ai,
Malaysia mungdan nga ai Myubaw sang hpu nau uhpawng nkau myi hta gaw u hpung lawlaw wa dai hku garan mat nga ai hpe mu lu ai.Gashadawn Chin, hpung3garan sai,Arakan ,
hpung3garan sai,Karen hpung2garan sai....e ndai hku mu lu nga ai.shada laika hte matsa hkat,man hkrum nna galaw hkat re taw sai hpe mu lu ai.Dai htaeuhpung langaiagabawemyit hkrum nga ai ni gaw an hte Kachin hte Kaya ni sha naw re.
Yaten hta gaw an hte Kachin ni htaemung sum prat gau ngwi ngwi nmyit mada ai lam hku shang wa ai hpe mu lu ai,Karai kasang nhkraw aiajawesha ya na zawn rau majaw gaw de nga ai re hpe mu lu ai.Dai majaw myuwunpawng sha ni zai ladat jaw jaw hte matut nna hkawm sa ra wa na re hpe mu lu ai,lahta na lam mang hkang ni n hkrum na matu Jagum hprawt jahpan ni hpe atsawm hkrak lajang ra ai lam ni,myuru sai shada hpyi n-gawng hkat ai sha tsawra hku hkau lam ni,(sex) mang hkang nbyin na matut Tinang hkum self control lam ni,hte myu sha ni ntsa sadi dung let myu hpe tsalam shadang tup rai sadi maja shakut sa wa ra na lam ni hpe mu mada nga ai.
Malaysia mungdanedap jung tawn ai dat kasa rung KDO,KRC mung shaning shagu ngu na ram UN lekmat jaw ngut ai hpang lamu mung mung re ai ten myi nga ai,
2003 - 2005,ning nnan hpang ai daw de mang hkang nga ai rai tim laja lana jahpoi asawng hkat ai lam gaw nau nnga ai ram re,Gawda tara nnga aiamajaw chye ai hku myi woi zinlum mat ai hta ra rawng ai majaw gashai galai hkat ai lam sha nga ai,
2006-2007 ning hta gaw kachin refugee ngu ai hku nna maigan de pru hkawm sa wa ai ni nga wa sai re majaw,an hte Royal kachin niamying jahten ai,Refugee ngu tsin yam matsan shayan re de woi sa wa ai,labau hka ji hkrum na madai nga nna Woi awn ai ning baw ni hpe myit sharu shatsang ya ai lam gaw nga ai,
2008 ning bai rai jang gaw UN lekmat lu ai ni hte nlushi ai nialapran na ahtik ahtawk ni grai law ai,woi awn ai ning baw ning la ni hpe Gum hpraw sha myit dai nga nna garu gachyi nga UN rung de sa shawk ai majaw UN lekmat jaw ai lam bai gan jahkring tawn ya ai hpe mu lu ai.
2009 Ya daining gaw chyeju hte hpring ai shaning ngu nna arawng la pyi rai nhtum yang bai, Gum hpraw mang hkang law nga bai gajai bang wa masai,Laika ni dip shabra re mung mu lu nga ai.Ra rawng ai lam hpe pri nem hkra shada bawng ban jahkrup nna shawng lam de sit shang ai ladat sha nlang yang gaw ,Dai ning mung kalang myi bai ahkaw hkang pat na lam she rai wa nga sai hpe mu lu ai.
An hte myu wunpawng sha nialam hpe yu dat yang,Ja gum hpraw lang ai ladat hta gawng kya ai lam gaw nga nga ai,Dai hpe atsawm hkrak di nna woi awn chye ai kamram ai myutsaw ni hpe ap da ai rai yang kaja mat wa na lam ni rai nga mali ai.Up hkang lam masa lam hta mung gawng kya ai lam ni nga chyalu sha rai nga ai,e ndai zawn gawng kya ra rawng ai lam lawlaw hpe gau ngwi ngwi sharai ,sharin hkaja la nna ,system hkrak hkra lu hkawm sa mat wa yang gaw Grai htap htuk yawngamatu akyu rawng ai lam byin pru chyalu sha rai nga mali ai.
Shada athik ahtawk ,Jahpoi asawng ,hpyigawng ,laika shabra hkat matsa mawa tsun hkat nna sha gaw Gaja ai mahtai pru na lam nnga ai hpe mu lu ai.
Karai kasang hkye la sai amyu ru sai ni tai sai re majaw Karai hpe Kam let sak hkrung Hkawm sa chye ai ni mung byin tai ra nga ga ai nrai ni?Woi awn kaja Hpang hkan Kaja ai Hkristuamyu kaja ni tai ra nga saga ai law...
news from- http://fine-leaves.blogspot.com
တ်တလော ကိုးကန့်ဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်အစိုးရနှင့် ကိုးကန့်တပ်တို့၏ တိုက်ပွဲများကြောင့် လူပေါင်း သောင်း ဂဏန်း တရုတ်ပြည်ဖက်သို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်အပေါ်တွင် မတူကွဲပြားသော သုံးသပ်ချက်များ ကောက်ချက်များလည်း ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
၁။ ကိုးကန့်အဖွဲ့သည်လည်း တရုတ်နွယ်ဖွားများဖြစ် သောကြောင့် တရုတ်အစိုးရမှ မြန်မာစစ်အစိုးရအား ထိုကိစ္စ များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှေ့၌ဖိအား ပေးမည်လော။
၂။ ထိုတိုက်ပွဲများကြောင့် တရုတ်အစိုးရနှင့် နယ်စပ်ဒေသတွင် တစုံတရာ နိုင်ငံရေးတင်းမာမှု ဖြစ်နိုင်သည်ကို သိသော် လည်း (နအဖ) စစ်အစိုးရဖက်မှ တမင်လုပ်ခြင်း ဖြစ်သလော။
၃။ ကိုးကန့်တပ်များသည် နယ်ခြားစောင့် တပ်အဖြစ်အသွင် ပြောင်းမည်ကို လက်မခံသော်လည်း အင်အား နည်းမှန်းသိ၍ ဂရုစိုက်စရာမလိုဟု သဘောထားသောကြောင့် နအဖက ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဝင်တိုက်ခြင်း လော။
၄။ ကိုးကန့်အဖွဲ့သည် ကချင်၊ ဝစသော တပ်များနှင့် စစ်ရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ထားသည်။ ထို့ကြောင့် တဖွဲ့ဖွဲ့ကို စစ်အစိုးရက တိုက်လာသည်ရှိသော် အချင်းချင်း အပြန်အလှန်ကူညီရန် သဘောတူထားကြသည်။ အမှန် တကယ် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပါက တဦးနှင့်တဦး တကယ်ကူညီ မကူညီကို စမ်းသပ်လို၍ ကိုးကန့်ကို အရင်တိုက်၍ သွေးတိုးစမ်းခြင်း ဖြစ်သလော။ လက်တွေ့ တွင်လည်း ကိုးကန့်တပ်များ အတိုက်ခံရသောအခါ ကချင်တပ်များ ဝတပ်များဖက်မှ အလုံးအရင်းဖြင့် ကူညီခြင်း မရှိသည် ကို၊ သေနတ်ပေါက်ခြင်း မရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
၅။ ကိုးကန့်အဖွဲ့ကို တိုက်ခြင်းသည် လာမည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို အချိန်ဆွဲလို၍ ကြိုတင်မီးမွှေး ထားခြင်းလော။ မကြာသေးမှီ ကာလကလည်း ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှကို ပင်လယ်ပြင် နယ်နမိတ်နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ (နအဖ) မှ ရန်စထား တာလည်း ရှိခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းရန် ပြည်ပရန်များကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကို အချိန်ဆွဲလိုသည့် သဘောဟု တဖက်တွင်လည်း ဆိုမည်ဆိုက ဆိုနိုင်သေးသည်။
နောက်ထပ် တမျိုးလှည့်၍ စဉ်းစားမည်ဆိုပါက နအဖ စစ်အစိုးရသည် ကိုးကန့်ကို အခုလို ပြောင်ပြောင် တင်း တင်း ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှာ ပီကင်း၏ တိတ်တဆိတ် မီးစိမ်းပြမှု မပါဘဲ ဝင်တိုက်ရဲပါ့မည်လား ဟူသည့် အချက်ဖြစ်သည်။
ကိုးကန့်အဖွဲ့အတွင်း ခေါင်းဆောင်အချင်းချင်း စီးပွားရေးပြိုင်ဆိုင်မှုကြောင့် ခေါင်းဆောင်များအတွင်း သပ်ရှို၍ ဖြိုခွဲမည်။ နအဖလိုလားသူ ခေါင်ဆောင်များ တက်လာပါက နယ်ခြားစောင့် တပ်အသွင်ပြောင်းရေးမှာ ပို၍ လွယ်ကူသွားမည်လည်း ဖြစ်သည်။ သပ်ရှိုဖြိုခွဲ၍ မရပါက နအဖဖက်နှင့် ပူးပေါင်းသူကို ပြောင်အကူအညီပေး၍ တဖက်ကို တိုက်ချလိုက်ရန်သာ ဖြစ်သည်။ ဤသို့ စီစဉ်စဉ်းစားမှုကိုလည်း နအဖက တရုတ်အစိုးရကို ကြိုတင် အသိပေး ထားနိုင်သည်။ နှစ်နိုင်ငံအစိုးရ လက်ဝါးခြင်း ရိုက်သည်ကို မည်သူ သိနိုင်မည်နည်း။ ကချင်နှင့် ဝတပ် များ သည်လည်း တရုတ်ဖက်မှ ခေါင်းခါပြနေသော ကြောင့် ကိုးကန့်ဖက်မှ ဝင်မတိုက်ဘဲ ရပ်ကြည့်နေခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သေချာတာ တခုကတော့ တရုတ်နယ်စပ်တွင် ကပ်၍ ဖောင်းဖောင်းမည်အောင် ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်မှာကို တရုတ်က ယခုကာလတွင် လိုလားလိမ့်မည်မဟုတ်။
ဤကိစ္စများ၌ မေးစရာ ဖြစ်လာသည်က တရုတ်အစိုးရက မြန်မာဗိုလ်ချုပ်များနှင့် ဘာကြောင့် လက်ဝါးရိုက်ဖို့ လိုသနည်း ဆိုသည့် မေးခွန်းပင်ဖြစ်သည်။ အတိုဆုံး အဖြေကတော့ နှစ်နိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွါးဟု ဖြေနိုင်သည်။
၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ထွက်ရှိလာမည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် တရုတ်သို့ ပိုက်လိုင်းသွယ်၍ ရောင်းချခြင်း။
၂။ အာဖရိကနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ တရုတ်ဝယ်ယူနေသည့် ရေနံစိမ်းများကို အချိန်အကုန်ခံ ငွေအကုန်ခံ၍ မလက္ကာ ရေလက်ကြားကို ဖြတ်ခါ တရုတ်ပြည်အထိ တင်ပို့နေရသည်။ ထိုရေနံစိမ်းများကို ရခိုင်ပြည်နယ်မှ တဆင့် ပိုက်သွယ်၍ တရုတ်ပြည်ကို တိုက်ရိုက်ပို့မည့် အစီအစဉ်လည်း ရှိနေသည်။
၃။ ဧရာဝတိမြစ်ဆုံကို ဆည်ပိတ်၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ခါ တရုတ်ပြည်သို့ ရောင်းချရန်လည်း ရှိနေသေး သည်။
၄။ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွင် တရုတ်ဖက်က ရသောအကျိုးအမြတ်သည် ကြီးမားသည်။ မြန်မာဖက်က တင်ပို့ နေသည်မှာ ကုန်ချောမဟုတ်။ သဘာဝရင်းမြစ် ကုန်ကြမ်းများသာ ဖြစ်သည်။ တရုတ်ဖက်က အရည် အသွေး နိမ့်သော ကုန်ချောများကို မြန်မာတို့ဖက်မှ ပြန်လည်ဝယ်ယူနေရသည်။
၅။ တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယ၏ စီးပွါးရေး တိုးတက်လာနှုန်းကို အနောက်ကမ္ဘာကပါ သတိနှင့် စောင့်ကြည့်နေရသည့် ကာလ ဖြစ်သည်။ နောင်လာမည့် ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း အိန္ဒိယနှင့်တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အချက်အခြာ ပို၍ ကျလာမည်။ ထို့ကြောင့် အခုကတည်းက တရုတ်ကုမ္ပဏီ မျိုးစုံ မြန်မာ ပြည်တွင် ခြေကုတ် ယူထားနေ သည်။ အနောက်တိုင်း စီးပွါးရေးသမားများက ထိုအချက်ကို မရှု့စိမ့်မနာလို ဖြစ်နေကြသည်။ သူတို့လည်း မြန်မာပြည်ကို ဝင်လိုနေသည်။ သို့သော် အနောက်ကမ္ဘာ၏ စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့မှု ဆိုသော အချက်ကြောင့် ဂွကျနေရသည်။
ပြန်ကောက်ရသော ကိုးကန့်ကိစ္စကို ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ဖြင့်ရှင်း။ တရုတ်ဖက်က လူကြားကောင်းအောင် အနည်းအကျဉ်း လောက် ဝေဖန်တာမျိုး တိုက်တွန်းတာမျိုး လောက်တော့ရှိမည်။ ကိုးကန့်ကိစ္စသည် စစ်အစိုးရ အတွက် တရုတ်က ကျိတ်၍ သဘောတူထားသော ပထမခြေလှမ်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျန်သည့် အပစ်ရပ်တွေ လည်း တဖြေးဖြေးနှင့် တရုတ်ဖိအားကို သဘောပေါက်လာ ရတော့မည်။
ဗကပပြိုကွဲစဉ်အခါက တရုတ်အစိုးရသည် ဗကပဖက်ကို ဘာမှ အကူအညီမပေးတော့ပါ။ ဗကပဖက်မှ ဗကပ ယူနီဖောင်း ဝတ်၍ ဝင်တိုက်ပေးတာမျိုးလည်း အရင်ကလို မလုပ်တော့ပါ။ အကျိုးစီးပွါးဖြစ်စဉ်က ခေတ်နှင့်အတူ ရွေ့လျား သွားခဲ့ခြင်း ကြောင့်ပင်။ ဗကပ ခေါင်းဆောင်များကိုတော့ ယခင်နိုင်ငံရေး ဆက်ဆံမှုအရ တရုတ်နိုင်ငံ ထဲတွင် နေထိုင်ခွင့်ပေး လိုက် သည်။ ထို့ထက်ပိုသော အကူအညီ တရုတ်ဆီက မရတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ကိုးကန့် တို့သည်လည်း အလားတူ ဖြစ်စဉ်ကို ရင်ဆိုင်ရတော့မည်လောဟု စဉ်းစားမိခြင်း ဖြစ်သည်။
ကချင်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဝခေါင်းဆောင်များကို တချိန်က တရုတ်မှပြောခဲ့သည်က ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာအထုတ်စုပ်ကို နိုင်ငံတကာမှာ လယ်ပြီးဖွင့်ပြမနေကြပါတော့နှင့်။ ကိုယ့်အချင်းချင်း ကြိတ်၍ ဖြေရှင်းခြင်းကသာ ပို၍အကျိုးရှိသည်ဟု ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သဘောကတော့ အထုတ်စုပ်ကို လယ်၍ဖွင့်ပြ နေပါက တရုတ်ဖက်မှ ဘာမှ အကူ အညီမပေးနိုင်တော့ဟု ဖိအားပေးခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးများ ထိုဒေသများတွင် နိဋ္ဌိတံခဲ့ရသည်။
အကျိုးစီးပွါးအရ တရုတ်အစိုးရသည် မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံမှာပဲ ဖြစ်သည်။ မြန်မာ စစ် အစိုးရနှင့် ပလဲနံပ မသင့်သည့် အုပ်စုများအတွက် ရှေ့ရှောက် ကာကွယ်ပေးလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ လူကြား ကောင်းအောင် ဝတ္တရား အရ ပြောတာလောက်ပဲ ရှိတော့မည်။ တဖြည်းဖြည်းခြင်း နွမ်းလျသွားသည့် ပန်းပင်ကို ခုတ်မပစ်သော်လည်း ရေလောင်း ခြင်း ပေါင်းသင်ခြင်း မြေသြဇာ ကျွေးခြင်း မရှိတော့ဘဲ ထိုင်ကြည့်နေသည့် သဘောသို့ ရောက်ရှိလာတော့မည်။
တဖက်တွင်လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရသည် အမေရိကန်တို့နှင့် အဆင်ပြေခြင်သည်ဟု တွက်ဆချက်များ ပေါ်ပေါက်လာ သည်။ တရုတ်တွေဖက်မှလည်း သူတို့ကို မထိခိုက်ပါက အမေရိကန်အစိုးရနှင့် မြန်မာ စစ် အစိုးရ တို့ အဆင်ပြေသည်ကို ဘာမှထူး၍ ဝေဖန်ပြောဆိုမည် မဟုတ်။
ထူးလာနိုင်သည် တခုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသည် အင်အားကြီး တရုတ်နှင့် အမေရိကန်တို့ ကစားမည့် ဘော်လုံး ကွင်း ဖြစ်သွားမှာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတို့အဖို့ စိုးရိမ်ဖွယ် ဖြစ်သည်။
စစ်အေးတိုက်ပွဲ ကာလများအတွင်းက အမေရိကန်အုပ်စုနှင့် ဆိုဗီယက်အုပ်စုတို့ အကြား မြေဇာပင်ဖြစ်ခဲ့ရသော နိုင်ငံငယ် များ မနည်းလှ။ ထိုနိုင်ငံငယ်များတွင် ဘယ်သူ အစိုးရဖြစ်ဖြစ် သူတို့စိတ်မဝင်စား။ စိတ်ဝင်စားသည်က ထိုအစိုးရများသည် ကိုယ့်လူဖြစ်ရင် ပြီးစတမ်း။ အာဏာရှင်မကလို့ မည်သူပဲ အုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ် ဒါကို နိုင်ငံကြီး များက ဂရုမစိုက်ပါ။ ထိုစစ်အေး တိုက်ပွဲကြီးကာလအတွင်း အမေရိကန်လူ ဆိုဗီယက်လူ ဆိုသည့် အုပ်စုများ လည်း ထိုနိုင်ငံငယ်များတွင် ပေါ်လာခဲ့ဘူး သည်။ လူထုအတွက် နားနှင့်မျက်စေ့ဟု ဆိုနိုင်သည့် စာပေနှင့် မီဒီယာ လောကတွင်လည်း အုပ်စုကွဲခဲ့ကြသည်ကို မမေ့ သင့်။
ယနေ့ကာလကတော့ အရင်းရှင်နှင့် ကွန်မြူနစ်အားပြိုင်သော စစ်အေး တိုက်ပွဲခေတ် မဟုတ်တော့။ သို့သော် ဓနအတွက် တော့ နိုင်ငံကြီးတိုင်း ပြိုင်နေကြသည်မှာ လက်တွေ့ဖြစ်သည်။ မြန်မာဆိုသောကွင်းအသစ်တွင် အမေရိကန်နှင့် တရုတ်တို့ ချစ်ကြည်ရေးပွဲ ကန်လိုက်၊ မိတ်ဆွေဖြစ် ကန်လိုက်၊ ကြေးပါသော်လည်း ကြေးမပါဟန် ကန်ကြမည့် ဘောပွဲတွေလည်း နောင်မှာ တွေ့ကောင်းတွေ့လာ နိုင်သည်။ ကွင်းပိုင်ရှင် ပြည်သူတွေကတော့ ဘယ်လောက် အကျိုးရှိမည်ဆိုတာ မပြော တတ်သေး။ ကွင်းကို ပွဲစားလုပ်နေသည့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် သူတို့၏ စီးပွါးဖက်များကတော့ အသေအချာ အကျိုးရှိမှာ အမှန်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နှင့် တရုတ်က သူတို့အကျိုးစီးပွါးအတွက်လည်း ဤဒေသကြီးအတွင်း ဝေစုခွဲနိုင်သေးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကို တရုတ်လှုပ်ရှားရာ နယ်ဟု သတ်မှတ်၍ မြောက်ကိုရီးယား ကိုတော့ အမေရိကန် အရေးအရာ ပိုင်သော နယ်အဖြစ် ခွဲဝေ၍ လုပ်ကောင်း လုပ်နိုင်သည်။ သူတို့အချင်းချင်း လက်ကျိတ်ထိုးတာ မည်သူအတိ အကျ စွပ်စွဲနိုင်မည်နည်း။
ညူကလီးယားသံများဖြင့် လှိုင်နေသော မြောက်ကိုရီးယားကို အမေရိကန်တို့ ပိုမိုစွက်ဖက်ခြင်းအားဖြင့် တဖက်တွင် တရုတ် အစိုးရအား မြန်မာနှင့် တိဗက်ကိစ္စများအတွင် စေလိုရာလို စေနိုင်သည်ဟု နားလည်မှုများ ယူကောင်းယူထား လာနိုင်သေး သည်။
ထို့အပြင် နောက်တခုကတော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လောကတွင်လည်း တရုတ်ထောက်ခံသူ အမေရိကန် ထောက်ခံ သူ အုပ်စု များ ဟိုမှသည်မှ အရှိုအရှို ပေါ်လာဦးမည်ကို တွေ့နေရသည်။
သူတကာ လာကစားသော ကွင်းအဖြစ်မခံလိုပါက နည်းရှိပါသည်။ ကိုယ့်အချင်းချင်း ကျေကျေလည်လည် စကားပြော၍ တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်တဦးတည်း ကိုယ့်အုပ်စု တခုတည်း ကောင်းစားဖို့သာ ရည်မှန်း ထားပါက တဖက်ဖက်ကို အသေကပ်ရတာ ဓမ္မတာဖြစ်သည်။ တဖက်ဖက်ကို ခြေစုံချ၍ အားကိုးပြီ ဆိုကတည်းက ခိုင်းဖတ် ဘဝသာ ရောက်ရမှာမလွဲပါ။
ကိုယ့်ကွင်းကို ကိုယ်ပိုင်ဖို့ ကြိုးစားတာသာ မှန်ကန်သော အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဖြစ်သည်။ ကိုယ်မကန်ရဘဲ အသင်းတကာ အသင်း ဝင်ချင်တိုင်းဝင်၍ ကန်သော ကွင်းမဖြစ်ဖို့ နားလည်ရန် အချိန်တန်ပေပြီ။
at 8/29/2009 10:10:00 PM
Shiga kahtet wa sai law..Jin jin yaw
at 8/28/2009 09:48:00 PM
Ndai hkau http://shanghtin.blogspot.com/asumla yu nna n gun grai lu ai,an hte Kachin ni mung Gabaw amyu myu hte shara grai naw lu nga ai,Makawp maga let bai jat la na hku di ga.
at 8/20/2009 10:20:00 PM
Chyeju hpring ai shaning 2009 KRC shiga
at 8/18/2009 09:39:00 PM
Dai ni hugawng hpe KRC myusha hpa awn ni KRC Monthly Journal Vol-1-No,5 Aug 09 Laika buk ngai wa jaw ma ai.chyeju kaba sai.Ndai KRC shiga laika pa hpe mungdan shagu nga ai an hte Kachin ni hpe lu shabra yang kaja ai ngu mu mada ai,Laika man 31 rawng nna shata myi hta kalang shapraw ai re lam chye lu ai.jinghpaw hku,Myenhku,English hku rai yawng chyena lu hkra gayau nna ka jahtuk tawn ai hpe mu lu ai.
Shiga gabaw de yu dat yang,Kanu mungdan kata,Malaysia kachin shiga,Mungkan shiga,UN shiga,NGO shiga,KRC hpaji dap shiga hte gara hku kaning rai hkawm sa tsun shaga ra ai lam matsun ni mung lawm ai hpe mu lu ai.
Eg: myit lawm na zawn re shiga gabaw ni hpe mung makawp(Cover) hta e...
KRC HTE HPAJI JAW NINGHPUM SALANG NI TSINYAM LAM JAWM BAWNGBAN PAGE-6de,JUNE SHATA 20 YA SHANI MUNGKAN TSINYAM MASAT NHTOI HPE AWNGDANG AI HKU GALAW LA-PAGE-3-de,,HPAJIDAP SARA/NUM NI A N GUN AWAI HKRUNLAM PENANG PANGLAI HKINGAU DE SA-PAGE-7-de,,TSIYAM NI HPE BALIK NI RIM NNA MANG HKANG BYIN YANG GARA HKU??LAIKAMAN-9-de
CHYEJU HTE HPRING AI SHANING 2009 KRC SHIGA--LAIKA MAN-5,8.DE,
hkum tsup hkra chye mayu yang KRC Journal she mari hti n gun jaw na hku di ga,KRC rung de matut yang mung grau htuk nga ai.
Hugawng tsun mayu ai gaw chyeju hpring ai 2009alam chyi myi re.kaja wa nan 2009 ning gaw KRC ni chyeju hpring ai hpe mu lu ai,shawoi shaning na hta UN lekmat jaw ai law dik shaning re hpe chye lu ai,daining gaw Kachin ni hpe 1500 jan jaw sai hpe mu lu ai.U ga amyu baw sang ni yawng hta jaw ai law dik re lam mung chye lu ai,moi shawng de gaw Chin hte kayin hpe sha law law jaw ai.an hte Kachin hpe gaw 250 jan hta nlai ai majaw gashun nna garu taw ra ra re hpe mu lu ai.Dai ning gaw yawng myitsim sa lam lu nga sai.
Dai hta sha n ga nna KRCamatu nga nna Mini Van motor car Good Second hand mung2ting jaw ai lam chye lu ai.Motor car hpe alu jaw ya ai ni gaw ;Malaysia,shaalam Catholic Chruch ,Devine Mercy nawku hpung kaw na re lam chye lu ai.Father Paul Lino KRC hpe ap ya nna 20th July 2009 shani MKBC naw ku jawng na REV: Dingshu lahkawng akyu hpyi shaman ya let hkap la lusai lam KRC shiga dap kawn chye lu ai.
သတင်းမှားများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း (fine-leaves blog...
Email kaw na laika(Aga Manmaw Manau shadung bai ht...
Nang Kadai re,Kaning re hpe chye mayu yang Test ga...
Ndai mung hti yu ga(http://myanmarslection.ning.co...
Food shortage worries indigenous Kachins in food-r...
Malaysia UN shiga ထိုင်းနယ်စပ် ဒုက္ခသည်အထိ ဂယက်ရိုက...
hugawngajawng ma prat na manang waablog bai ht...
Laiwa sai ten na KRC,KDO ning baw Usaashagun lai...